Cuntada caadiga ah ee Aguascalientes: Isku -dhafka caloosha caloosha ee Mexico | Wararka Safarka
Cuntada caadiga ah ee Aguascalientes
Luis Martinez | 08/09/2021 15:00 | Gastronomy, Mexico
La cuntada caadiga ah ee Aguascalientes waa mid hodan ah oo kala duwan. Tani waxay inta badan sabab u tahay taariikhda gobolka Meksiko, laakiin sidoo kale badeecooyin badan oo ka mid ah beeraheeda iyo cuntooyinkii awoowayaashii oo soo noqnoqda waqtiyadii Columbian-ka ka hor.
Duruufta koowaad ee aan soo sheegnay waxay la xiriirtaa xaqiiqda ah in Aguascalientes loo aasaasay joogsi waddada isku xirta gobolka dhexe iyo caasimadda Ku -xigeennimada New Spain, taasi waa, iyada oo la leh Magaalada Mexico lafteeda (halkan ayaan kaaga tagaynaa maqaal ku saabsan magaaladan), ku dhisan jir Tenochtitlan. Waxay ahayd dhul aad u baaxad weyn oo ka kooban hantida Hispanic ee Waqooyiga Ameerika, gobolka dhexe ee qaaradda, iyo xitaa jasiiradda Cuba iyo kuwa ku dhow. Laakiin, iyada oo aan la sii dheereyn, waxaan kaala hadli doonnaa wax walba oo la xiriira cuntada caadiga ah ee Aguascalientes.
1 Cuntada caadiga ah ee Aguascalientes: Isku -darka Meksiko
1.1 Caqli -xumada Aguascalientes iyo xiriirka ay la leedahay jikada
1.2 Cuntooyinka caadiga ah ee Aguascalientes
1.2.1 Digaag San Marcos
1.2.2 Basbaaska cufan ee avokado
1.2.3 Menudo, waa cunto kale oo caadi ah oo ka timaada Aguascalientes oo ay tahay inaad isku daydo
1.2.4 The birria
1.2.5 Doofaar nuugan duban
1.2.6 Gorditas cufan
1.2.8 Cabitaannada caadiga ah ee Aguascalientes
Cuntada caadiga ah ee Aguascalientes: Isku -darka Meksiko
Waxa aan hadda sharraxnay, suxuunta caadiga ah ee Aguascalientes waa isku -darka ah gastronomy Mexico. Waa run in lagu sameeyo hab asaliga ah oo lagu daro maaddooyin badan. Laakiin, ka hor intaan xoogga la saarin cuntada caadiga ah ee gobolkan, aan waxyar ka hadalno taariikhdiisa iyo is -bahaysigiisa. Maaha wax aan micne lahayn, gastronomy, dhul iyo horumar taariikheed ayaa aad isugu dhow.
Caqli -xumada Aguascalientes iyo xiriirka ay la leedahay jikada
Muuqaalka muuqaalka Aguascalientes
Sidii aan dhahnay, Aguascalientes waxaa loo asaasay sidii joogsi waddo lacag ah, kuwaas oo isku xiray miinooyinkii Zacatecas la socota Mexico City. Waxay ku taal meel woqooyi ka xigta aagga Shoal, kaas oo isku daraya meelaha waaweyn iyo bannaanka buuraha leh ilaa laba kun oo mitir.
Waa gobol aad u barwaaqo badan, sidaa darteed waqti dheer kuma qaadanin beeraleyda iyo ganacsatadu inay halkaas degaan, taasoo abuurtay waaxda beeraha oo barwaaqo ah. Isaga ayaa ku mahadsan, marka lagu daro, calool -xumada aagga ayaa la hodmiyey.
Cimilada Aguascalientes lafteeda ayaa si weyn uga qayb qaadatay tan. Waxay soo bandhigtaa heerkulka khafiifka ah sanadka oo dhan, oo celcelis ahaan qiyaastii 17 digrii Celsius. Badanaa kama hoos maraan shan ama ka badan soddon. Dhiniciisa, roobabku way yar yihiin, laakiin waxay leeyihiin wabiyaal, biyo -xidheenno iyo farsamooyin waraab oo qadiimi ah oo wax ka tara duruufahaas.
Natiijada waxaas oo dhan ayaa ah wax soo saarka beeraha galley, qamadi, basbaas, baradho, yaanyo, avokado, canab iyo digir, inta badan. Dhammaan khudaartaan waxaa laga helaa gastronomy ee Aguascalientes, iyo sidoo kale carnes waxaa soo saarey xoolaheeda xooga leh. Gobolku wuxuu leeyahay lo 'iyo lo' doofaarro muhiim ah, laakiin sidoo kale riyo iyo ido.
Markaan kuu sheegno alaabta ceyriinka ah ee cuntada caadiga ah ee Aguascalientes iyo xaaladeeda taariikheed ee gaarka ah, waxaan diirada saari doonaa suxuunta caadiga ah, oo qaarkood aad jeceshahay.
Cuntooyinka caadiga ah ee Aguascalientes
Gobolka iyo inta badan caasimadiisa, dhaqanka casho, kaas oo, sida magacu tilmaamayo, u adeega noocyo kala duwan cunto fudud casho. Taa baddalkeeda, kuwani waa adeegyo yaryar oo ah tacos, enchiladas, flautas, tamales, tostadas ama pozole, taas oo ah, diyaargarow dhaqameedka Mexico oo dhan. Laakiin sifaha Aguascalientes ka badan ayaa ah suxuunta aan hoos kaga hadli doonno.
Digaag San Marcos
Digaag hore loo kariyay
Sidoo kale loo yaqaan Aguascalientes digaag, waa mid ka mid ah suxuunta dhaqanka ee gobolka. Sida caadiga ah waa la diyaariyaa, sida magaceeda ka muuqata, gudaha FAagga San Marcos, kaas oo loo arko midka ugu muhiimsan Mexico. Dabaaldeggan wuxuu soo bilaabmay 1828 wuxuuna ka dhacayaa aag sagaashan hektar ah.
Waxaa ka mid ah meelaha ugu soo jiidashada leh waa Horyaalka Qaranka Charrería iyo dhacdooyinka muusikada. Laakiin sumadeedu waa Beerta San Marcos, socod aad u qurux badan oo leh balustrades halkaas oo lagu qabto falal badan oo carwadda ah.
Laakiin, dib ugu noqoshada digaaggii Aguascalientes, waxaa la diyaariyaa iyada oo hilibka la shiido kadibna lagu daro suugo ka samaysan miraha. Tani waa yaab yaab leh oo ka kooban sonkor, qorfe, fersken, isteroberi, yaanyo, iyo abrikot. Kadib wax walba waa la kariyaa oo saxanku wuxuu diyaar u yahay in la dhadhamiyo.
Basbaaska cufan ee avokado
Basbaaska basbaaska Aguacala
El Chile Waa qayb aasaasi ah oo ku jirta caloosha caloosha Mexico. Noocan basbaaska ah ayaa laga cunaa dalka oo dhan. Laakiin Aguascalientes waxay leedahay qaabkeedii caadiga ahaa ee lagu samayn lahaa taas oo ay kaga duwan tahay gobollada kale.
Marka hore, waa basbaas weyn oo gudaha lagu faaruqiyo oo la buuxiyo. Badeecadaha loo isticmaalo tan waa hilibka lo'da iyo hilibka doofaarka, basasha, biznaga, toon iyo guava oo siiya taabasho macaan. Sababtoo ah mid ka mid ah astaamaha astaamaha ah ee basbaaska aguacalestense waa taas ma cuncun.
Menudo, waa cunto kale oo caadi ah oo ka timaada Aguascalientes oo ay tahay inaad isku daydo
In kasta oo muuqaalkiisu ku siin karo xoogaa murugo ah, waxaan kuu xaqiijineynaa in menudo ay tahay saxan macaan oo ay tahay inaad isku daydo haddii aad booqato Aguascalientes. Waxay u dhigantaa annaga corns, laakiin diyaarin kala duwan.
Runtii, waxay leedahay qaybo caloosha lo'da ah, laakiin sidoo kale lafo, lugaha, basasha oregano, toon, basbaaska basbaaska la qalajiyey iyo yaanyo. Waxaas oo dhan, suugo loo yaqaan maraq caloosha. Sidaa darteed, ha ka welwelin marka ay timaaddo dhadhaminta farxaddaan.
Birria, oo ah cunto caadi u ah Aguascalientes
Tani sidoo kale waa saxan hilib. Waxaa lagu sameeyaa hilib lo'aad ama hilib doofaar oo lagu kariyey dubitaanka. Markaas qori, basal iyo basbaaska basbaaska ayaa lagu daraa. Maaddooyinkaas iyo casiirka ka soo baxa hilibka, maraq ayaa loo diyaariyaa kaas oo yaanyo lagu daro.
Laakiin waxa ugu yaabka badan ayaa ah karintiisa. Waxaa lagu sameeyaa weel bir ah oo la geliyo ceel hore loogu buuxiyey dabka qoryaha. Caleemaha Maguey iyo carrada ayaa dusha la saarayaa waxaana laga tegayaa ilaa afar saacadood. Ugu dambayntii, hilibka ayaa la wada siinayaa maraqii aan kor ku soo sheegnay oo la raaciyey Maskaxda hadhuudhka. Marka la soo koobo, saxan si siman u macaan.
Doofaar nuugan duban
Carnitas doofaar oo jaqaya
Dhab ahaantii, doofaarka nuujinaya ama doofaarka dhallinta yar waa yaab gastronomic ah oo adduunka oo dhan laga cuno. Iyadoo aan horay loo sii socon, saxankani wuxuu caan ku yahay Castile oo dhan (halkan waa maqaal ku saabsan magaalada Toledo ee Castilian). Laakiin dadka Aguascalientes waxay leeyihiin qaab u gaar ah oo ay ku qaataan.
Mar haddii hilibkii la dubay, waa la jeexjeexayaa oo la adeegsanayaa guacamole isku qasan casiirka koowaad laftiisa. Marka tan la sameeyo, waxay ku cunaan saxan ama gudaha taco. Sidaad ogtahay, tani waa a tortilla galley ah cufan oo la duudduubay. Sida xiisaha leh, waxaan sidoo kale kuu sheegi doonnaa in qaabkan ugu dambeeya ee loo cuno uu yahay mid soo noqnoqda si loo soo afjaro xafladaha habeenkii, marka ay tahay waqtigii la aadi lahaa guriga.
Cuntadani waxay asal ahaan ka soo jeedaa cuntada waddooyinka, sida burrito ama, si sax ah, the tacso. Si kastaba ha noqotee, waxay noqotay cunno -macaan ee guud ahaan Mexico gaar ahaan Aguascalientes.
Waxa kale oo lagu sameeyaa roodhida hadhuudhka ee qaabka tortilla. Kadibna waxaa lagu buuxiyaa hilibka doofaarka, digaaga ama lo'da iyo haragga. Tan dambe waa salad aad u fiican oo lagu diyaariyo basasha, khalka, kaabajka iyo karootada. Ugu dambayn, suugo macaan ama basbaas leh ayaa lagu daraa si ay ugu habboonaato qofka wax cunaya.
Flan farmaajo Guava
Macmacaanku aad bay muhiim ugu yihiin cuntada caadiga ah ee Aguascalientes. Waxaa ka mid ah, waxaan kuu soo qaadan karnaa kareemka iyo duubka subagga, isagu Koncheche sabiib iyo qumbaha daaqay ama qolof, oo ah rooti macaan oo kala duwan.
Si kastaba ha ahaatee, waxaan rabnaa inaan kuu soo xiganno flan farmaajo guava si aad u noqoto mid macaan badan. Walxaha ay ka kooban tahay waa ukun, caano ciriiri ah, karamel iyo farmaajo kareem. Laakiin tabarucaadkii asalka ahaa ee aagga waa guava, miro aad u wanaagsan oo aad ugu badan Aguascalientes.
Cabitaannada caadiga ah ee Aguascalientes
Koob caws ah
Ma dhammayn karno socdaalkii aan ku tagnay cuntadii caadiga ahayd ee Aguascalientes annaga oo aan kuu sheegin cabitaankooda. Kuwa aan khamriga lahayn, waxaan kugula talineynaa inaad tijaabiso haad, kaas oo laga soo saaro maguey, oo ah warshad kale oo caan ku ah aagga. Sidoo kale isaga Uvate macaan, kaas oo lagu sameeyo canab, qorfe iyo sonkor.
Dhankeeda, cabbitaannada aalkolada ah waxaad ku haysataa khamri, khamriyo laga soosaaray miraha iyo khamriga. Laakiin wax walba ka sarreeya, the xiidanka, sidoo kale loo yeedhay habeen.
Waa khamriga asalkoodii ka horreeyey Columbian-ka kaas oo laga sameeyay halsano ah nopal iyo isteroberi kale oo aad u qallafsan. Caadi ahaan, the ubax cas oo cas, markaa cabitaanku wuxuu leeyahay midabkan. Si tan loo sameeyo, casiirka geedahan waxaa la kariyaa laba ama saddex saacadood ka dibna loo daayaa si uu u qoolo dhawr maalmood. Natiijadu waxay tahay macaan macaan oo necba leh oo dhadhan fiican leh.
Gebogebadii, waxaan ku tusnay qaar ka mid ah suxuunta caadiga ah ee Aguascalientes, oo ah gobolka Meksiko oo leh cunno dhadhan fiican leh isla markaana soo saarta ismaandhaafka leh saamaynta ka timaadda aagagga kale ee dalka. Si kastaba ha ahaatee, waxaan xusi karnaa cuntooyin kale oo badan. Tusaale ahaan, pocholas, kuwaas oo lagu sameeyo hilib digaag dhulka ku jira oo loo duudduubay sida hilibka lo'da oo la siiyo digir iyo bariis. Ama sidoo kale jilicsanaanta suugada morita chile, kaas oo ah hilibka doofaarka oo ay weheliyaan maraqa noocaas ah basbaaska oo leh sharaf in loo tixgeliyo saxanka ugu nacnaca badan gobolka. Marka la soo koobo, saxan kale oo ah cuntada caadiga ah ee Aguascalientes waa hilibka tatemada, kaas oo leh basbaas iyo basbaas, iyo, ka dib markii la shiilay, waxaa la siiyaa bariis, digir iyo, dabcan, tortillas galleyda ah. Miyaadan u malayn inay yihiin suxuun macaan?
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » America » Mexico » Cuntada caadiga ah ee Aguascalientes
Dharka gobolka Galiciya